जनता क्याम्पस नियुक्ति प्रकरण (फलोअप) : क्याम्पस प्रमुख र भट्टराईको योजनामा तोडियो नियम - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ०४, २०७५ समय: १२:४८:०९
इटहरी । इटहरीस्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसले एउटै पदमा दुईजनालाई दिएको नियुक्ति बैधानिक नभएको पाईएको छ । क्याम्पस संञ्चालन गर्न बनेको बिधान विपरित क्याम्पस प्रमुख र पदपूर्ति समितिका संयोजकको ‘मिलेमतोमा’ नियुक्ति गरिएको हो ।
शुरुमा पुस्तकालय साहयकको लागी पत्रिका मार्फत एक जनाको लागी खुल्ला आवेदनको सुचना प्रकाशित गरिएको थियो । पछि बिधानलाई नै लत्याउदै क्याम्पस प्रमुख भोजराज श्रेष्ठ र पदपुर्ति समितिका संयोजक चन्द्र भट्टराईको योजनामा आफ्नी छोरीलाई च्याप्दै नियुक्ति गराएका हुन । तर पदपूर्ति समितिका सदस्य बिकास केसी पनि पछि नहट्ने भएपछि क्याम्पस प्रशासनको मिटिङ बोलाई एकाएक पद सिर्जना गरी केसी श्रीमतीलाई समायोजन गरिएको थियो ।
जस अनुरुप पुस्तकालय साहयकमा भट्टराईको छोरी सृष्टि र पद सिर्जना गरि बनाइएको ई–लाईबेरी (कम्प्युटर ल्याब सहित) साहयकको लागी केसीको श्रीमती शारदा पोखरेललाई ‘मिलाएर’ एउटै पदमा दुईजनालाई नियुक्ति गरिएको हो ।
तर नियम अनुसार पनि ई–लाईबेरीको लागी नियुक्ति गरिएको प्रकृया गलत छ । कुनै पनि पदको पूर्ति गर्न क्याम्पसले पत्रिका मार्फत सुचना निकाली खुल्ला आवेदन जारी गरी प्रतिस्पर्धी बिच लिखित र मौखिक परिक्षा लिनु पर्ने हुन्छ ।तर क्याम्पस प्रमुख र पदपुर्ति समितिका संयोजक भट्टराईको छोरीलाई जागिर लगाउने बिषयको ‘अबरोध हटाउन’ कै लागी नियम मिचेर मनोमानी गरेको क्याम्पस प्रशासनका कर्मचारी स्वयम बताउछन् ।
‘नियुक्तिको बिषयमा खुलेर क्याम्पस चिफ र चन्द्र भट्टराई लागेको देखियो,’ एक कर्मचारीले भने ‘यो शतप्रतिशत नातावादको रुप हो’ ।
‘अखिर दुवै जनालाई राख्नुनै थियो भने खर्च गरेर काठमाडौबाट मान्छे झिकाएर नाटक किन गरियो’ ? ति कर्मचारीले प्रश्न गरे । मौखिक अन्तरवार्ताको लागी मात्र काठमाडौ र बिराटनगरका ३ जना लाईबेरियनलाई बिराटनगरमा राखेर करिब ४० हजार खर्च गरिएको ति कर्मचारीले जानकारी दिए ।
पुस्तकालय साहयकको लागी लिइएको अन्तरवार्ता पनि झारो टार्ने भएको र नियुक्ति गरिएको व्यक्तिहरुको डकुमेन्ट पूर्ण नभएको ति कर्मचारीको दाबी छ ।
यता ई–लाईबेरीको लागी शारदा पोखरेललाई नियुक्ति गरिए पनि लाईबेरी बन्ने अझै छाटकाट छैन । लाईबेरीको लागी आबश्यक कम्प्युटरको खरिद प्रकृयाको ‘प्रोसेस’ अहिलेसम्म प्रशासनले अगाडी बढाएको छैन । लाईबेरी बनाइने स्थानमा अहिले फर्निचर मात्र देख्न सकिन्छ ।
नतिजा सार्वजनिक गर्न माग
पुस्तकालय साहयकको लागी आवेदन भर्ने पवित्रा दर्नाल, रिना भट्टराई (आर्चाय) र संजिवकुमार दाहाल लगायले नियुक्ति गरिएका सृष्टि भट्टराई र शारदा पोखरेलको नजिता सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
लिखित र मौखिममा दिइएको सम्पूर्ण नंम्बर र पपेर सार्वजनिक गर्नु पर्ने उनिहरुको माग छ । एक पदको लागी भनि सुचना गरिएकोमा दुईजना नियुक्ति गर्दा आफुहरुलाई मानमर्दन गरिएको पवित्रा दर्नाल बताउछिन् । ‘प्रष्ट रुपमा समितिका मान्छेले आफ्नालाई च्यापिएको देखियो,’ उनले भनिन ‘दुवैजनालाई नियुक्ति गर्दा ल्याइएको नम्बर हामी हेर्न चाहन्छौ’ ।
‘आफ्नालाई मात्र नियुक्ति गर्ने थिए भने पत्रिकामा सुचना निकालेर नाटक किन गरियो त ? उनले प्रश्न गरिन । क्याम्पसले नजिता सार्वजनिक नगरे सम्बन्धित निकायमा जाने दर्नालले चेतावनी दिइन ।